Fitiavan'olon-bodofotsy - plastika amin'ny kibon'ny zaza aorian'ny fiterahana, cesarean, abdominoplasty ny kibo lava, mialoha sy aorian'ny saripika
Ny hatsaran-tarehy sy ny kirarony dia mamela vehivavy iray hahatsiaro ho matoky. Na izany aza, tsy ny vehivavy rehetra no afaka mirehareha amin'izany. Ny fanandramana hanitsiana ny toe-javatra amin'ny fanampiana ny sakafo sy ny dokam-barotra namboarina dia matetika mandiso fanantenana. Ny fomba tokana ivelan'io toe-javatra io dia ny abdominoplasty amin'ny kibo. Io fomba fanao io dia mitaky ny zavatra andrasana.
Fampahalalana momba ny abdominoplasty
Io fomba fanao io dia atao amin'ny fandidiana. Ny tanjon'izy ireo dia ny hamerenana indray ny feon'ny muscat amin'ny abdominale amin'ny alàlan'ny fakana antenaina sy ny hoditra. Alohan'ny hanatanterahana io fomba io, ny dokotera dia tsy maintsy mandinika ny marary mba hahafantarana ny maha-mety ny fandidiana. Ny fandidiana plastika ny kibo dia ekena amin'ny tranga toy izany:
potiosis, izay mitranga eo amin'ny lozan'ny fatiantoka mavesatra , ny fitondrana vohoka na ny fahanteran'ny vatana;
ny fisian'ny mararin'ny vatana mangatsiaka;
hernia umbilical ;
ny mari-pamantarana maromaro;
Feno "takona", ny haavony dia 10 na mihoatra.
Ny plastika amin'ny kibo aorian'ny fiterahana
Ity fomba fiasa amin'ny fandidiana ity dia manana toetra tsara sy tsy dia tsara. Ireto manaraka ireto no anisan'ireo voalohany:
Vokatra avy hatrany, afaka mahita izany avy hatrany ianao aorian'ny fandidiana;
ny vokatra lava indrindra amin'ny "tranom-bovoka";
tsy misy fanaintainana, satria ny fomba fitsaboana dia atao eo ambanin'ny fanenjanana;
Ny vokatra tsara dia azo avy amin'ny tranga 98%.
Amin'izany fotoana izany, ny abdominoplasty amin'ny kibo aorian'ny fiterahana dia mifandraika amin'ny fotoana ratsy:
sarany fandaniana amin'ny fikarakarana;
Tahaka ny ataon'ny mpikaroka hafa, dia mety hitera-doza ny aretina;
vanim-potoana fanarenana lehibe.
Ny plastika ao amin'ny kibon'ny kesarean
Ny fidirana amin'ny fandidiana dia azo atao tsy alohan'ny taona iray aorian'ny fiterahana. Amin'izao fotoana izao dia ampy tsara ny manasitrana ny marariny, ny vatana ary ny tsy fahombiazan'ilay sary. Ny abdomenoplasty ao amin'ny kibon'ny kesarean dia tanteraka amin'ny fomba mitovy amin'ny aorian'ny fahaterahana, izay nitranga tamin'ny fomba tsotra, na nahitana haingana be.
Raha marary amin'ny marary ny marary, mandritra ny fandidiana dia mandinika ny mpandidy azy ary mampihena azy. Rehefa mitombo ny hozatry ny kesareana na ny fiterahana dia homena tanteraka ny abdominoplasty ao amin'ny kibo. Mandritra ny fandidiana, dia mihamafy ny rindrin'ny rindrina ao amin'ny lavaka. Ary raha ilaina, ny fialana amin'ny tavy sy ny fivoahana ny fetsy.
Ity fombafomba ity dia misy karazana fifanolanana:
olana amin'ny fiterahana ra;
dingana matanjaka loatra;
taona 18 taona ary 60 taona;
Talohan'ny abdominoplasty ny kibo, ny marary dia tokony hitatitra ny vokatr'izany rehetra izany. Ny fiheverana dia aloa amin'ny tranga mety hitranga, ny fisehoan-javatra tsy azo lavina, ary ny fanarenana ny asa fitoriana. Aorian'ny fampahalalana toy izany, dia manapa-kevitra ny mpandidy hanazava fepetra henjana.
Na izany aza, ilay marary izay voapotsipototra abdominoplasty (plastika ao an-kibo) dia tokony hanaraka amim-pitandremana ny torolalan'ny dokotera ho an'ny fanarenana taorian'izay. Ny hariva manaraka dia tokony ho afaka amin'ny asa mafy ny vehivavy. Ny asa maivana ihany no azo ekena. Raha tsy izany, dia mety ho sarotra ny mety hitera-doza.
Ankoatra izany, ny fahombiazan'ny fidirana amin'ny fitsaboana dia miankina amin'ny faharetan'ny lanjan'ny marary. Ao amin'ny vehivavy manana lanjany ara-dalàna, dia mitaky haingana kokoa ny vanim-potoana fanarenana noho ny amin'ny ducks. Ankoatra izany, dia miteraka fahasarotana goavana ny latsa-danja matavy loatra eo amin'ny kibo. Noho izany antony izany dia ilaina ny manaraka ny rafitra entina mialohan'ny fandidiana sy ny fandidiana.
Abdominoplasty amin'ny kibo - asa
Ny fahombiazan'ny fitsaboana chirurga dia miankina amin'ny fanomanana ny fanatanterahana ny marary. Ireto manaraka ireto no ilaina:
fluorographie sy electrocardiogram;
Resaho amin'ny mpitsabo sy ny anesthésiologist.
Ary mandritra ny iray volana eo ho eo alohan'ny fandidiana, tokony hiala amin'ny alikaola sy fifohana sigara ianao. Amin'io fotoana io ihany, tokony hajanona ny tsimok'aretina fanodinkodinana sy hormonina. Mialà amin'ny fanafody sy ny zava-mahadomelina izay misy fiantraikan'ny ra. Amin'ny fotoam-pikarakarana, ny sakafo dia tokony ahitana sakafo manankarena amin'ny proteinina.
Ny fanitsiana ny kibo (abdominoplasty) dia toy izao manaraka izao:
Classic (maharitra hatramin'ny dimy ora ny fandidiana);
apronectomy, nandritra izany dia nisy ny fametrahana fiara mifamatotra, manamora ny fanangonam-bolam-panjakana;
mini abdominoplasty ny kibo;
paikady, izay anesorana ny hernia.
Abdominoplasty kely amin'ny kibo
Io fomba fanao io dia manana ny anarany faharoa - "hatsaram-panetren-tena". Izany dia tanterahina amin'ny fanenjehana ankapobeny. Ny faharetan'ny fandidiana dia tokony ho 2 ora. Ny plastika ao am-bohoka dia aseho amin'ny dingana manaraka:
Ny fanoratana voalohany dia natao amin'ny kibo. Manampy amin'ny fanombanana ny toe-javatra "avy ao anatiny" izy. Fifehezana ny tavy sy ny hoditra "be loatra" avy amin'ny ampahany amin'ny kibo ary manapaka azy. Ankoatra izany, mifamatotra ny hozatry ny hozatry ny kibo.
Ny fametahana sy ny fampiasana rongony.
Misy rafitra fitsinjaram-batana napetraka.
Seam taorian'ny abdominoplasty
Noho ny marariny, ny mpandidy dia mampiasa volon-tena. Indraindray, raha mila manamboatra ny tazomoka ianao, dia afaka mampiasa fitaovana metaly manokana. Mba hisorohana ity farany dia mila mandefa ny dokotera 2 herinandro aorian'ny fandidiana ianao. Amin'io fotoana io, ny oisea aorian'ny abdominoplasty dia tsy dia lafo loatra ary ny famerenana amin'ny laoniny ny tavy.
Ny gorodona aorian'ny fitrandrahana toy izany dia mitovitovy amin'ny lavarangan'ny lavaka eo amin'ny kibo. Mandra-pahasitrany, tokony ho raisina amin'ny vahaolana antiseptika manokana izany. Ankoatr'izay, dimy andro taorian'ny fandidiana dia tsy azo atao sedra ny voa, noho izany, mandritry ny vanim-potoana, dia voaràra ny douchana sy ny fandroana. Raha toa ka manasitrana ny fanasitranana amin'ny tiroida ny marariny, dia mety ho lasa hypertrophic na keloid. Amin'ity tranga ity, dia ilaina ny fanitsiana sifotra fanampiny.
Abdominoplasty ny kibo - fahasarotana
Na ny mpandidy manana traikefa aza dia tsy afaka milaza tanteraka ny vokatry ny fandidiana. Tsy voavaha ny olana raha vao tafiditra. Mety ho ankapobeny na eo an-toerana izy ireo. Noho izany, ny fahasarotana aorian'ny abdominoplasty amin'ny kibo dia mety mifandraika mivantana amin'ny fanafody ampiasaina amin'ny asa. Noho ny tsy fahampian-drongony diso, ny marary dia mety hahatsapa ny pnemonia sy ny olana hafa amin'ny fihazakazahan'ny rafi-panafody. Rehefa lehibe loatra ny faritra fivoahana, dia misy ny fivontosana ny areti-maso.
Ho fampihetseham-batana amin'ny natiora eo an-toerana, dia ahitana tranga toy izany:
necrosis of the surface;
ny fahaverezan'ny fahatsapana ny hoditra;
fitotongana ao amin'ny ratrain'ny serous fluid.
Underwear taorian'ny abdominoplasty
Ity fomba fiasa amin'ny fitsaboana ity dia fomba tena sarotra. Mba hahatratrarana ny vokatra tiany, dia tokony hanaraka ny torolalan'ny dokotera tsy misy fepetra ny marary aorian'ny fandidiana. Ny iray amin'ireo fepetra hahazoana vokatra mahomby amin'ny fidirana amin'ny fitsaboana dia ny fitafy ny akanjo manokana. Ity akanjo ity dia manampy amin'ny fampihenana ny fihenan-tsakafo ary haingana kokoa ny fatran'ny fanasitranana.
Ny fametahana rongony aorian'ny abdominoplasty dia vita amin'ny fitaovana avo lenta, izay ahitana ny landihazo, microfiber ary lycra. Ny akanjo toy izany dia manome fiantraikan'ny fanasitranana manokana: mihatsara ny fifindran'ny rà, mihamitombo ny metabolisma ary mitombo ny elasticity. Koa satria mila manao akanjo mendri-pikirahana ianao mandritra ny volana voalohany aorian'ny fikarakarana, dia atolory amin'ny marary ny fividianana akanjo roa amin'ny iray (izany no mety ho fiovana). Ankoatra izany, zava-dehibe ny fisafidianana ny habeny mety ho an'ny fanasan-damba.
Belly taorian'ny abdominoplasty
Ny traikefa ara-pahasalamana lehibe amin'ny dokotera manam-pahaizana amin'ny fanatanterahana io karazana asa io dia manampy azy ireo hatoky ny fanitsiana ilay sary. Ny teny fikasany dia tsy teny feno. Nahomby izy ireo tamin'ny fikarakarana abdominoplasty: talohan'ny sy taorian'ny sary dia naharesy lahatra tamin'izany. Noho ny fampiasana ny teknolojia ambany sy ny fanjavonan'ny taranaka farany, dia mora kokoa sy haingana ny fanarenana.
Ahoana ny fomba hanafoanana ny pinworms?
Ahoana ny fijerena ny tsina kely?
Kâlda - fitsaboana
Kanseran'ny voankazo - soritr'aretina
Lidocaine amin'ny ampoules
Ny herpeso mena dia ny fitsaboana tsara indrindra
Metastases amin'ny atidoha
Kely amin'ny maraina amin'ny olon-dehibe - antony
Protein-cocktail ao an-trano
Tantaran'ny tena izy
Tomaty amin'ny jelly - recipe
Famolavolana lahateny amin'ny ankizy 2-3 taona
Sakafo legioma ho an'ny fahaverezan'ny fahavoazana - sakafo
Ahoana ny fomba hanesorana ny fofona saka amin'ny pipet?
Parmelia - fananana medikaly
Kitapo miaraka amin'ny abrisika amin'ny yogourt
Volombava misy ranom-boasary misy henan'aloka - recipe
Vehivavy mainty hoditra vehivavy
Famonoana bibikely - tsara kokoa?
Sarotra ny miaina - antony
Ahoana ny fisafidianana ny valin-dambany?
Angel Diet - safidy tsara sy tsara indrindra
Coagulogram - decoding
23 mpilalao sarimihetsika malaza tamin'ny taon-dasa teo aloha sy ankehitriny
Toeram-pitsaboana prosthetika - cermets